Maalin: Janaayo 13, 2020
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Turkiga Cahit Turhan ayaa sameeyay bayaan ku saabsan Mashruuca Channel Istanbul. Turhan waxay caddeynaysaa sababta loogu baahan yahay Canal Istanbul, oo ah biyo loo adeegsado gaadiidka caalamiga ah ee badda ee Bosphorus. [More ...]
Dhageysiga, maxaabiista tijaabada ku jirta, shaqaalaha tareenka, gaar ahaan calaamadaha kuleylinta nidaamka kululeynta tareenka, dayacaad la'aanta tababbarasho la'aanta. Sida ku cad warkii ka soo baxay Evrensel; 24 XNUMX doorashooyinkii Juunyo inkasta oo aan lahayn nidaam tilmaam [More ...]
Ololaha Turkey baabuur Industry Inc. National Electric tareenka ayaa la bilaabay. Warshadu waxay dardargelin doontaa shaqadeeda shaqaalahana waxay hadda shaqeyn doonaan Sabtida. Tareenka qaran waxaa loo qorsheeyay inuu ku socdo wadada tareenka dhamaadka Juun ama Luulyo. Turkey baabuur [More ...]
Duqa Magaalada Sakarya ee Magaalo Weyn Ekrem Yüce ayaa sheegay in la sameyn doono sahan lagu sameynayo mashruuca taraafikada taraafikada, kaas oo dhowaan lagu qabtay kulan horudhac ah. Isaga oo ka hadlaya golaha magaalada, sahanka waxaa la weydiin doonaa muwaadiniinta iyo ganacsatada. Degmooyinka Waaweyn [More ...]
Ganacsiga caalamiga ahi wuxuu ka dhigan yahay xaaladda guud ee isweydaarsiga labada dal ee midba midka kale ka dhexeeya. Waddankeenna, labada deriska ah ee dariska ah iyo waddamada dibedda oo leh ku dhawaad ​​wixii hore [More ...]
Taariikhda Wadista Imtixaanka ee Ankara Sivas YHT Line Go'aamisay
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, Tareenka Xawaaraha Sare ayaa bixiyay macluumaadka ku saabsan shaqada. Wasiirka Turhan, wadooyinka imtixaanka ee loo yaqaan 'YHT', illaa iyo qayb ka mid ah wadida imtixaanka ayaa bilaabmi doonta Maarso, ayuu yidhi. [More ...]
Xarunta Denizli Ski Center, oo ah mid ka mid ah meelaha loogu jecelyahay ciyaaraha jiilaalka, ayaa ku orda rikoorka tirada dadka soo booqda. Xilliga cusub, Xaruntu waxay booqatay ilaa 50.000 oo qof ilaa iyo haatan. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu waxay sii wadaysaa hirgelinta maalgashi kordhin doona soo jiidashada Boztepe. Baaxadda mashruucu wuxuu leeyahay, muwaadiniintu waxay ku raaxeysan doonaan Boztepe oo leh waddo lugeynaya dhagxaanta cagaarka ah, 27 unug iibsi, abaabul dhul daaqsimeed. [More ...]
Maxkamaddii ugu horreysay ee shil tareen xawaare sare ku dhacay oo ka dhacay Ankara bishii Diseembar 2018, oo ay ku dhinteen sagaal qof in ka badan 80 qofna ay ku dhaawacmeen, ayaa ka bilaabmay maxkamadda Ankara Courthouse. Saddex kiis [More ...]
Bandhigga Palandöken, oo ay soo qabanqaabisay dowladda hoose ee magaalada Erzurum ee ku taal bartamaha magaalada Palandöken Ski Center, ayaa waxaa buux dhaafiyay taageerayaal isboorti. Fuulitaanka barafka casriga ah, iskeytiga barafka, farshaxanka barafka iyo munaasabado kale oo badan [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya, isgoyska Gaza Street ee ay la wadaagto City Street aya meesha ka saartay dalabka Isgoyska Dugsi Isgaarsiinta Nidaamka Xakameynta (Intelligent Junction). Aydınlıkevler Junction, Selçuklu Junction, TOKİ Fırat Junction, Karatay Warshadaha [More ...]
Mashruuca waalalka ah ee Madaxweyne Tayyip Erdoğan Kanal waxaa lagu qeexay inuu yahay "qorshaha İstanbul Channel Istanbul sür ajandaha, halka mashaariicda dowladda sida Fatih project, Yavuz Sultan Selim Bridge, Osmangazi Bridge, Airport-ka 3aad iyo isbitaalada Magaalada la xaqiijiyey sanadihii la soo dhaafay. [More ...]
Madaxweynaha GSO Adnan Ünverdi, tikniyoolajiyadda wadaniga ah iyo tan gudaha ee baaxaddeeda leh ee la raacaya gaadhigayaga gudaha ayaa soo maray isbadal weyn, ayuu yidhi. Rugta Wershadaha Gaziantep (GSO) Adnan Ünverdi, qaran iyo [More ...]
Ka soo horjeedda sheegashada Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turan, waxay noqotay in Madaxweynaha Magaalada Istanbul (IMM), oo joojiyay dhismaha wadada tareenka Basaksehir-Kayasehir ee la xiriirta isbitaalka magaalada, uusan aheyn Ekrem Imamoglu laakiin Mevlut Uysal. gaadiidka [More ...]
Khidmada Tareenka Xawaaraha Sare ee Billaha ah